Ungayifumana njani ingcali efanelekileyo yokuphucula injini?
Abanikazi bezoshishino ze-Ecommerce, i-webmasters, okanye i-novice osomashishini abasemagqabini-bonke bajoliswe kwiinjongo enye. Injongo eyona nto kukukwenza ukuba iwebhusayithi ibonakale phezulu kwiphepha le-injini ye-injini (SERPs). Ngelishwa, akusiyo wonke umntu onokuziva ekwazi ngokwaneleyo indawo ehambelanisiweyo ye-Engine Engine Optimization (SEO), kungekhona ukuthetha abo banikela iinkonzo zoshishino lobugcisa, okanye basebenze kwiqela, okanye i-agrojethi egcweleyo yedijithali yokucwangcisa injini ye-injini - web hosting in bogota.Yingakho ininzi lethu lisenokwenzeka ukuba sizame ukuqonda kakuhle le nto ngokwayo, nangona iyaziwa kakhulu ukuba iyasebenza kakhulu kwaye ichitha ixesha elininzi kunoma yiyiphi na isisombululo. Ngoko, ekugqibeleni sifike ekugqibeleni-sicinga ukuba kufuneka sibe neenkonzo ze-SEO kuphela ezineenkqubela phambili ezicacileyo, apha kubakho isidingo esiqinileyo sokuqesha ezinye iingcali zeengcali zokukhangela injini.Kodwa ungayifumana njani inkcazo enokuthenjwa okanye inkampani kuloo ntlawulo yezinto ezifanelekileyo kwi-Intanethi? Indlela yokwenza umehluko phakathi kweprojekthi yangempela, umnikezeli we-SEO obuthakathaka, okanye nokuba ngabagxeki nje nje bazenza njengenzululwazi zokuphucula injini? Ndiyakholwa ukubuza le mibuzo elandelayo kwaye ukujonga iimpendulo ezinikezelwa ngabaviwa bangaba yindlela elula yokuqonda ngubani. Ngoko, makhe sibone.
Cela abacebisi be-SEO abathembisayo ukuba bakubonise ubungqina babo,. e. , uludwe lwabaxhasi babo bokuqala nabemi. Iingcali zengcali zokukhangela injini zisoze zisoze zanelisekile ukukunika lonke ulwazi oluyimfuneko kunye neenkcukacha zoqhagamshelwano. Ukwenza njalo, unokwazi ngokukhawuleza ukuba ngaba umboneleli we-SEO ufanelwe, okanye akukho nto. Ungakhangela kuphela naziphi na iiprojekti zazo zangaphambili naziphi na iziphumo ezilungileyo kwizikhundla zokukhangela ezingcono.
Babuze ukuba baya kusebenza njani kwiziko lewebhu kwiziko le-SERP. Igunya le-SEO elifanelekileyo aliyi kulahla nayiphi na into, nokuba yinkqonkqo, ingxoxo okanye uphando. Kufuneka ubonise ngokuthe ngqo umtsalane ochanekileyo kunye nemigudu yabo ye-SEO ezayo ngesinyathelo sakho senkqubela phambili kunye nenyathelo ngelixa udibanisa iithagethi zakho ekupheleni.
Qinisekisa ukuba ube nophando lwezobugcisa olubandakanyiweyo kwisiphakamiso seenkampani abanikela kuso. Ingxelo enjalo kufuneka ifake ingxelo ngeengxaki zonke zobugcisa kwiwebhsayithi yakho ijongene nalo mzuzu. Ndiyathetha ukuba kufuneka uboniswe ngoko nangoko iimeko, ngokukodwa, zithintela indawo yakho ekumgangatho wokunyusa.
Khangela indlela ezo zengcali zengcali zokukhangela ezenzelwe ukulandelela amanani akho kwiwebhusayithi. Ngexesha elifanayo, qiniseka ukuba banikezela bonke abaxhasi ngokufikelela ngqo okanye ubuncinane ukwabelwana okuhleliweyo kweziphumo zabo, ezixhaswe nedatha echanekileyo esuka kwi-Google Analytics.
Yaye apha siza kumbuzo osisombululo. Buza nje ukuba banokukunika isiqinisekiso sokuboniswa phezulu kwi-SERPS, ndiyathetha ukuthatha inombolo yendawo kwinani lemiphumo yophando. Ngaba kufanelekile ukuba unikwe impendulo engqinelanayo, unganqikazi ukushiya "uchwepheshe" ngale saziso esifutshane. Iingcali zangempela zengxowankulu yokukhangela i-intanethi aziyi kumtshela umthengi njengento engafaniyo. Abangenangqiqo, okanye ababi kakhulu, abagxeki bangabenza njengaleyo ukukopela kumakhasimende alula kunye namava.